Ilhan Cumar Oo Lagu Tageeray Murashaxnimada Madaxweynaha Maraykanka. – somalilandtoday.com
Ilhan Cumar Oo Lagu Tageeray Murashaxnimada Madaxweynaha Maraykanka.
(SLT-Washington)Urur hanti badan leh oo horumarka u dhaqdhaqaaqa ayaa aqoonsigooda ugu horreeya ee taageerada doorashada aqalka Koongareeska Mareykanka ee 2020-ka siiyay Ilhaan Cumar, oo ah gabar muslim ah oo ka tirsan aqalka wakiillada, sida ay shaacisay warbaahinta Fox News.
Arrintan ayaa kusoo aadday xilli ay Ilhaan wajaheyso eedeymo xoog leh oo la xiriira Yuhuud Naceyb iyo waxyaabo kale oo muran salka ku haya.
Waxay ururku sheegeen inay arrintan kusoo beegeen dhaleeceynta daba socotay hadalladii ay jeedisay gabadhan laga soo doortay gobolka Minnesota.
Hase ahaatee, taageeradan ayaa noqon karta mid ku adag Ilhaan, maadaama ay horay marar badan uga hadashay sida ay uga soo horjeeddo siyaasadda lacagta dabada looga riixo.
Ururka MoveOn ayaa caan ku ah inuu mar walba xabadka u garaacdo musharraxiinta xisbiga Dimuqraaddiga, kuwaasoo uu dhaqaale badan ku garab istaago.
Doorashadii 2018-kii ka dhacday Mareykanka, wuxuu ururkan ku taageeray lacag dhan $3.5 malyan oo doolar.
Ilhaan Cumar ayaa dhawaanahan wajaheysay dhaleeceyn uga timid hadallo ay jeedisay, kuwaasoo siyaabo kala duwan loo arkay.
Waxaa maalmihii lasoo dhaafay si weyn loogu eedeynayay hadallo la sheegay inay ku buun buunisay khasaaraha Soomaalida kasoo gaaray howlgalkii uu mareykanka Muqdisho ka fuliyay sannadkii 1993-kii.
Isniintii ayaa dib loo soo saaray qoraal ay Ilhaan kusoo bandhigtay barteeda Twitter-ka sannadkii 2017-kii.
Horraantii bishanna, Ilhaan Cumar waxa ay sidoo kale wajahday eedeymo ku saabsan sida ay uga hadashay weerarradii daaraha Mareykanka lagu qaaday 11-kii bishii Sitembar ee sannadkii 2001-dii.